737 Dhibaato badan oo kubadda caan ah
Su'aal 737 Dhibaato badan oo kubadda caan ah
1 sano 3 bilood ka hor - 1 sano 3 bilood ka hor #826 by deckerb
Jadwalaan xirmadan, gaar ahaan dhawaaqyada dhabta ah, iftiinka khafiifinta cockpit iyo in ka badan.
Waxay u muuqataa in ay tahay arrin la socota iyada oo si lama filaan ah u ficil-celineysa meel ku dhow daaqada fuulitaanka. Sidoo kale xakamaynta duubka guntinta ayaa si tartiib ah u gaabinaysa in la dedejiyo, iyadoo leh ama aan lahayn rabshad. Waqti adag ku haayo xitaa 140 duubka. Iyaga oo ka jawaabaya qaar ka mid ah faallooyinka ku yaal bogga download, aniga ma ahan midka kaliya ee arrintaan leh.
Faahfaahin kasta oo ku saabsan qalab ama shaqo-joojin waa la qiimeeyaa.
Last edit: 1 sanad 3 bilood ka hor by deckerb. Sababta: Ereyada maqan
Isticmaalayaasha ayaa xiran
1 sano 2 bilood ka hor #827 by xHobbit420x
Google iyo xirmo xirmooyinka 164 737.
1 sano 2 bilood ka hor #828 by deckerb
Thanks, laakiin dhab ahaantii. 737 default default ma laha kartida weyn ee buqashadaan.
1 sano 2 bilood ka hor #829 by bencas
waxay isku dayeen in ay sameeyaan qalabka laydhka ah oo lagu qeexay shahaadada 1.7-1.8 oo ay tahay inay hagaajiyaan xagal toos ah.
1 sano 1 toddobaadkii ago - 1 sano 1 toddobaadkii ago #939 by DRCW
Tani waa markii labaad ee aan akhriyay dhibaatadan, waxay u egtahay in aysan ahayn arin 737-800 waa arrin la xiriirta jiilka weyn ee qaabkan. Runtii way fududahay in la hagaajiyo ... Tag CFG faylka diyaaradaha, oo ku sii jeeda qaybta [Engineka] raadi khadka Static_Thrust = Isbeddelka rikoodhka xaddidan 4000 Tusaale Haddii ay akhriso Static_Thrust = 22980 Ku dar xaddiga xNUMX ee xabadka si ay u akhriso Static_Thrust = 26980 kadibna keydso. Waxaan u maleynayaa inaad si fiican u shaqeyn doonto.
Isbedelkii ugu dambeeyay: 1 sanadka 1 by ago by DRCW.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: isidel
Year maalmood 1 6 ago #948 by misshu
Halkee feylka ku jira CFG? Waxaan isku dayayaa in aan helo oo aanan u muuqan karin inaan helo
Year maalmood 1 6 ago - Year maalmood 1 6 ago #949 by DRCW
Hello, Halkaan riix daaqadahaaga daaqadaha ama ka bilaw qeybta hoose ee shaashaddaada, tagto kombiyuutarka, dooro drive C / barnaamij x86, microsoft, waa inay jirtaa FSX, furo oo waxaa jira liisto dheer ... dooro SimObjects, ka dibna dooro diyaaradaha .... Halkan waa meesha aad diyaarad u tahay FSX la keydiyay ... hel helitaanka diyaaradaha aad raadinayso liiska ... feylka iyo liiskaas diyaaradaha cfg Tani waa feylka CFG. haddii aad u baahato wax dheeraad ah caawimaad iigu sheeg. Way fiican tahay inaad ogaato nooca daaqadaha aad leedahay. Maadaama aadan waligaa furin faylka cfg ka hor intaanad riixin waxaadna doorataa furan "Notepad [/ color]"
Halkan waxaa ah tusaale u ah qaybta aad raadin doonto:
Waxaan ka soo qaaday CRJ-700
Last edit: 1 sanad 6 maalmood ka hor by DRCW.
Year maalmood 1 4 ago #964 by superskullmaster
Waxaan haystaa xirmo casriyeyn oo waxtarka leh oo dhan. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u helo hab aan ku falanqeynayo waan ubaahanayaa.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.348